App.Xiaomi.Com Tiktok Mupepeti Apk Download For Android
4.7 / 5 ( 21 mavhoti )
TikTok yakarambidzwa munyika dzakasiyana uye kuona dambudziko iri isu takaunza nyowani android application iyo iri imwe nzira yeTikTok uye zita reapp ndiApp.Xiaomi.Com Tiktok Mupepeti. Kusvika ikozvino iyi ndiyo yakasarudzika nzira Apk kuunzwa nevanokudziridza.
Mazuva ano TikTok ndiyo inosimudzira zvakanyanya Social Media App pakati pevashandisi ve android iyo inowanikwa kurodha pamusoro peGoogle Play Store. Iyo inozivikanwa zvikuru pakati pehudiki uye nekuda kwekuwedzera mukuzivikanwa kwayo ikozvino vanhu vakuru vari kuishandisa zvakare sekuvaraidza kudhira shamwari uye nhengo dzemhuri.
Asi nekuda kwezvikonzero, TikTok inorambidzwa mukati menzvimbo dzakasiyana seIndia, Saudi Arabia uye UAE etc. Tichifunga nezvezvino mamiriro ekuvandudza madhigirii vakasarudza kugadzira yakadai android apk inoshanda neimwe TikTok.
Than iyi Xiaomi Tiktok Mharidzo yakagadzirwa. Iyo Apk inovhara zvakafanana zvimiro zviripo mukati meTikTok asi ivo vakawedzera iyi nyowani mukati mukati inonzi Social Media Counter. Kubva uko vatariri vanogona kugovera vhidhiyo clip zvakananga pamusoro akasiyana Social Media Foramu.
Iyo Yakanongedza Bhatani Bhatani inogonesa vaoni kuti vatore vhidhiyo yavanofarira mukati memahara avo. Kana iye / iye achida kugadzira dhatabhesi kwavanogona kuchengeta, kugovera uye kunyange kuona mavhidhiyo gare gare munguva yemahara.
Chii chinonzi App.Xiaomi.Com Tiktok Mupepeti
Makiyi eSpecial eApp
Maitiro Ekuodha uye kuisa App
Icho chiri chishandiso che android chinonyanya kugadzirwa chakatarisa avo vanoshandisa admin vasina mukana weTikTok uye unorambidzwa zvachose mukati memunyika mavo. Dhawunirodha iyi Apk ichagonesa mushandisi kuti agadzire mavhidhiyo madiki ekuisa akasiyana mafirita uye nekuagovera pamusoro pemapoka akasiyana uye maakaunti.
Kunyangwe dzakasiyana Midhiya Yemagariro Inowedzerwa mukati meiyo App kuti aumbire musiki azive nezvehuwandu hwehuwandu hwemigawo uye zvavanoda. Nekuda kweisina akasiyana uye ane masimba maficha, iyi pfupi vhidhiyo foramu zvakare yakakurumbira mukurumbira pakati pevashandisi munguva pfupi.
Chinangwa chikuru chekupa iyi Apk kupa mukana wekushandisa mamwe maapplication kupfuura TikTok. Kana iwe uchitsvaga imwe nzira yeTikTok pane isu tinokurudzira kuti iwe uise iyi Apk mukati mefoni yako. Isu tinovimbisa kuti hazvizokuodza mwoyo.
zita App.Xiaomi.Com Tiktok Mupepeti
zera 80.55 MB
Package Zita com.ss.android.ugc.aweme
Iyo inonakidza chikamu nezve iyi App ndeyekuti iwe unogona kuona uye kusangana neyako yaunofarira super inotanga kutevera maakaunti avo. Ehe, watinzwa isu chaicho, mashura ndevemaindasitiri akasiyana emafirimu zvakare vachishandisa ino foramu kufadza vateveri vavo nenguva.
Iyo app yakasununguka kurodha uye kuisa pamusoro peema smartphones. Kana iwe uchitsvaga puratifomu kwaunogona kuratidza tarenda rako nenzira yezvimedu zvipfupi. Kupfuura Apk iyi yakakwana, ingobaya bhatani rekuodha uye ratidza tarenda rako pasi rese.
Vakadai vane tarenda admin vashandisi vanotenda hunyanzvi hwavo hwakasiyana uye hunokwezva kupfuura iye / iye anogona kuita kuti vamwe vanhu vazive nezve hunyanzvi kurekodha zvidimbu zvemavhidhiyo mafirimu.
Vanowona vanogona kudzidza hunyanzvi zvinoenderana neminda dzakasiyana nekutarisa idzi pfupi vhidhiyo zvikamu.
Super Stars ndeyakasiyana mafirimu maindasitiri zvakare kuwanikwa ekutevera.
Kunyangwe iwo muoni anogona kutarisa uye kutevedza akasiyana masimu. Kana iye / kana achida mimhanzi ivo vanofanirwa kutevera mhanzi yemumhanzi. Rwiyo rwemimhanzi runosanganisira opera, yeklasikiki, dombo uye pasi mimhanzi.
Maitiro eku dhawunirodha ari nyore uye nyore kuita. Zvese zvaunoda kuti uite ndezve kungobaya pakanzi yekuburitsa bhatani uye kudhanilodha kwako kuchatanga otomatiki. Isu tinoita chokwadi chekupa yazvino vhezheni yekurodha link yeApp.Xiaomi.Com Tiktok Mharidzo mukati mechinyorwa.
Paunenge iwe waitwa nekuodha iyo inotevera nhanho ndiko kuiswa uye kushandiswa kweApk. Kunyangwe iri nyore, nerubatsiro rwevashandisi isu takapa imwe nhanho pasi apa.
Kutanga, enda kune mobile storages chikamu uye uwane Apk Faira kubva kuKutora Folder.
Dzvanya paApk kutanga chirongwa chekuisa.
Kana ichinge yaiswa zvakakwana, enda kune iyo menyu menyu ndokudzvanya pane App icon.
Mushure mekuvhurwa kweapp, iwe unokwanisa kuwana zvisingaverengeke zvevaraidzo zvemukati zvemahara.
Unogona zvakare edza zvinotevera Tiktok Alternatives.
Isu tinotenda kusvika pari ino ndiyo yakatsiva yepamusoro iTikTok. Vashandisi ve Android vanogona kuikanda kubva apa yemahara. Paunenge uchirodha pasi kana kushandiswa kweApk, kana iwe ukasangana chero dambudziko unzwe wakasununguka kutibata nesu. Yedu nyanzvi timu inosvika kwauri kana tangogamuchira yako query.
App.Xiaomi.Com Tiktok Mupepeti
App.Xiaomi.Com Tiktok Mupepeti Apk
App.Xiaomi.Com Tiktok Mupepeti App